Nahitana afisy mikasika ny fizarana fanafody faobe maimaimpoana ireo elakela-tranon’Antananarivo, ny faran’ny herinadro teo. Voasoratra teo amin’ilay takelaka fa mandritra ny volana martsa 2019 kanefa efa aty amin’ny 11 mey vao nisy nametraka. Vita amin’ny taratasy
tsara sady ambony kalitao izy io. Mitovy amin’ny afisy ofisialy rehetra na ny lohateny na ny votoatiny, indrindra fa ireo andrim-panjakana voakasika sy ireo fikambanana iraisam-pirenena mpiara-
miombon’antoka. Ny ivon’ny olana mitoetra amin’ny salan-taonan’ny ankizy izay 5 ka hatramin’ny 15 taona. Voasoratra fa eny amin’ny toeram-pianarana sy eny anivon’ny fiarahamonina no
anatanterahana izany. Ady amin’ny bilarziozy sy kankana no tanjona. Velon’ahiahy ny mponin’Antananarivo amin’ireo ankizy sao mihinankinam-poana izy ireo. Niteraka adihevitra teo
amin’ireo mpandalo sy mponina izany. Raha ny fandiniky ny mpanara-baovao, miteraka rahoraho ity afisy lany daty ity, indrindra mifaninana amin’ireo an’ny mpirotsaka ho fidiana Solombavambahoaka. Ny marainan’ny sabotsy izay tsy iasan’ny mpiasa birao no nitrangan’izany ka tsy hita nanamarinana
ny fototry ny vaovao avy amin’ny minisitera mpiahy sy ny fokontany.